होस्टग्याटरको होस्टिङमा ६० प्रतिशत छुट (Flash Sale) – Nepali Tech Blog
Home → छुट तथा अफर
होस्टग्याटरको ६० प्रतिशत छुट पाउँन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
होस्टिङ सेवाहरु सामान्यतया महगों नै हुने गर्छ तर बेला बेलामा आउँने छुटहरुले होस्टिङहरु निकै सस्तो पनि पाउँन सकिन्छ । आज त्यस्तै छुटको अवसर छ । होस्टग्याटरले आज तिन घण्टाको लागि छुट ल्याएको छ । यो नेपाली समय अनुसार रातको १ बजेदेखि ४ बजेसम्म रहनेछ ।
होस्टग्याटरको होस्टिङ कस्तो छ ?
होस्टग्याटर, वर्डप्रेस वेबहोस्टिङमा सबैभन्दा मन पराइएको कम्पनी मध्येको एक हो । गुणस्तरिय वेबहोस्टिङका लागि यसले विभिन्न समयमा धेरै अवार्डहरु पनि जितेको छ । मैले केहि ब्लगहरु यसमामा होस्ट गरेको छु । सस्तो मुल्यमा पाइने तर अचम्मै राम्रो सुविधा दिने वेबहोस्टिङ हो यो । यसले अनलिमिटेड होस्टिङ, अनलिमिटेड ब्यान्डविथ, जति पनि डोमेन थप्न मिल्ने, स्टान्डर्ड कन्ट्रोल प्यानल लगायत एउटा फ्रि डोमेन पनि दिन्छ । वर्डप्रेसले सिफारिस गरेका केहि आधिकारिक वेबहोस्टिङ पनि हो यो ।
यो कम्पनीको सपोर्ट सिस्टम भने मन हर्ने छ । यदि तपाई वेब होस्टिङका बारेमा सामान्य ज्ञान पनि राख्नु हुन्न अनि केहि समस्या आए कसरी समाधान गर्ने केहि जान्नु हुन्न भने होस्टग्याटर वरदान हो । यसको सपोर्ट सिस्टममा लाइभ च्याट गर्नुस् वा फोन, तपाईका समस्या तुरुन्त समाधान गरिदिन्छन् । मैले मेरो एउटा साइटमा अनावश्यक प्लगिन राखेर समस्या आयो । मैले लाइभ च्याटमा गएर समस्या बताएँ, तिनीहरुले २ घण्टाभन्दा बढि समय लगाएर पुरै साइट ठिक बनाइदिए । यसैले वर्डप्रेसमा ब्लग तथा वेबसाइट चलाउँन मैले सिफारिस गरेका होस्टिङ सेवाहरु मध्येको एक हो होस्टग्याटर ।
होस्टिङको प्रारम्भिक जानकारीका लागि यो पोस्ट उपयोगी हुन सक्छ । पढ्नुहोला – किन किन्ने होस्टिङ ?
कसरी किन्ने छुटमा ?
१. यो ६० प्रतिशत छुटको अफर आजको लागि, त्यो पनि ३ घण्टाका लागि मात्रै हो । यसैले यो अबधि बाहेक नियमित शुल्क पर्नेछ । यसैले किन्नका लागि यो लिंकमा जानुहोस् – होस्टग्याटरको ६० प्रतिशत छुट पाउँन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
२. त्यसपछि Get Started Now मा क्लिक गर्नुहोस् र यो पेजमा पुग्नुहोस्
३. त्यसपछि ChooseaPlan मा क्लिक गरेर आफ्नो लागि प्लान छान्नुहोस् । यदि तपाई एउटामात्रै ब्लग वा वेबसाइट चलाउँन चाहनु हुन्छ भने पनि Baby Plan नै किन्नु होला । यसमा एक भन्दा बढि वेबसाइट चलाउँन सकिन्छ । त्यहाँ Sign Up गरेर शुल्क तिर्ने पेजमा पुग्नु हुनेछ ।
४. शुल्क तिर्नु पर्ने पेजको पाँचौ नम्बरमा आफै कुपन कोड आइसकेको हुनेछ । यदि आएको छैन भने बक्समा AUGUSTFLASH2 कोड राखेर Validate मा क्लिक गर्नुहोस् । र, शुल्क तिर्नुहोस् ।
होस्टिङ खरिद गरिसकेपछि होस्टिङ सेटअपका लागि सहयोग चाहिएमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
latest वर्डप्रेस होस्टग्याटर होस्टिङ